China 3.3g Gelatin Ishidi ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Isibonelo, i-matcha cheese mousse yenziwa ngokuhlephula amabhisikidi wokugaya ukudla emshinini wokupheka bese uwaxuba noketshezi lwebhotela elicibilikile. Qiniseka ukuthi uxubeka kahle.Bese uwuthululela kusikhunta esiyisiyingi esingama-intshi amane, phansi kwesikhunta esiyindilinga khumbula ukupakisha ucezu lwephepha likawoyela kusengaphambili! Bese ulihlanganisa nekhanda likaphini wokugingqa, qiniseka ukuminyanisa, ukuminyana endaweni yokugcina iziqandisi efrijini; Faka amaphilisi e-gelatin esitsheni, bese uthela amanzi abandayo abilayo esitsheni; Hlanganisa ushizi othambile noshukela we-icing. Shaya ushizi nge-whisk kagesi ize ivuvuke kancane. Phakamisa i-matcha powder isitsha esincane usincibilikise ngamagremu angama-30 amanzi ashisayo. Ngoba i-matcha powder kunzima ukuyincibilika, qiniseka ukuyinyakazisa kakhulu.Thela i-matcha esitsheni soshizi bese usebenzisa i-whisk kagesi ukuxuba kahle. Qiniseka ukuthi uhlangana kahle.Faka ishidi le-gelatin elithambile ebisi, bese ushisa ubisi phezu kwamanzi ukuze uncibilikise kahle ishidi le-gelatin. khanyisa i-whisk ukuyishaya. Bese sizoshaya ukhilimu okhanyayo kuze kube ngu-7 futhi sizoyisabalalisa, ize ibe mkhulu futhi izohamba kancane; Bese uxuba ukhilimu okhanyayo noshizi we-matcha shaya kuze kuhlanganiswe kahle Thela i-matcha cheese mousse batter efrijini. (Le iresiphi ingasetshenziselwa ukwenza isikhunta esiyindilinga esingu-4-intshi.) Banda ubusuku bonke.
Langaphambilini 2g Ishidi le-Gelatin
Olandelayo: 5g Ishidi le-Gelatin